Iziphumo ezibalulekileyo zamanzi ekukhuleni kwesityalo: 1. Amanzi yinxalenye yesityalo; 2. Ukubanakho ukugcina ukuma kakuhle kwezityalo 3. Amanzi sisinyibilikisi sezityalo ...
Khetha inkqubo encinci yokunkcenkceshela, gcina yonke idriphu yamanzi!
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, iimveliso ezininzi zezolimo ezithunyelwa kumazwe angaphandle kwihlabathi liphela zithwaxwa yimbalela, ethe yanempembelelo enkulu kuqoqosho lwehlabathi. Ngokomzekelo, iUnited States neBrazil ziye zathwaxwa yimbalela. Ingqolowa, umbona ...
Unkcenkceshelo lokuchela, oko kukuthi, unkcenkceshelo lokunkcenkceshela, yindlela yokunkcenkceshela ephezulu esebenzisa iseti yezixhobo ezizodwa zokutshiza amanzi phantsi koxinzelelo emoyeni, ukwenza amathontsi amancinci, njengemvula, ngokulinganayo afafazwe kumhlaba olinyiweyo ...
1.Xa iteyiphu yokunkcenkceshela isetyenziswa phantsi kwefilimu yezolimo, ngenxa yokukhanya kwelanga, amanzi aphezu komhlaba aya kunyuka abe ngumphunga, kwaye iya kudibana kumathontsi amancinci amanzi kwifilimu yezolimo. La mathontsi amancinci amanzi aya kwenza ilensi. Phantsi komgama ofanelekileyo kunye nelanga ...